Nkwupụta ọha: Chọta ndị na - emetụta ya, Wulite Mgbasa Ozi, ma Tụọ Nsonaazụ | Martech Zone
Thursday, January 7, 2021 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Firmlọ ọrụ m na-arụ ọrụ na onye nrụpụta ugbu a na-achọ ịzụlite akara, wuo saịtị ecommerce ha, ma zụọ ahịa ngwaahịa ha maka ndị na-azụ ahịa na nnyefe ụlọ. Ọ bụ teknụzụ anyị tinyego n'oge gara aga na otu ihe dị mkpa iji gbasaa iru ha bụ ịchọpụta ndị na-eme ihe ike, ndị na-eme ihe nkiri, na ndị ọrụ ụlọ ọrụ iji nyere aka wulite ma chụọ nnweta.
Lure ahịa Influencer na-aga n'ihu na-eto, mana nsonaazụ ya na-esonye na otu esi emetụta onye na-emetụta gị na ahịa ị na-achọ iru. Ndị na-eme ihe sara mbara, dị ka ndị a ma ama, nwere ike ịdị oke ọnụ na nnukwu echiche, mana ha na-enwekarị nzaghachi nzaghachi. Agbanyeghị ọnụego mmetụta dị ala na micro-influencer, ha na-enweta nzaghachi dị elu karịa na -enweghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-esonụ.
Dị ndị nwere mmasị na itinye aka na ahịa influencer na-agbasi mbọ ike ịchọpụta ndị na-egbu egbu. Nnyocha a chọrọ bụ ihe na-agwụ ike ma ọ bụghị dị mfe dịka naanị ịchọ ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ. Ọ bụ ịghọta niche ha nwere ikike na ya, ntụkwasị obi ha na ndị na-eso ụzọ ha nwere, yana mmekọrịta nke ozi ha na ndị na-ege ha ntị.
Nke a bụ nnukwu ụzọ esi achọpụta ndị na-eme ihe ike iji rụọ ọrụ Mediakix.
Isi Iyi: Mediakix
Nkọwapụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke Ọha
Dị nwere ngwá ọrụ ugbu a iji nyere ha aka ịchọpụta ndị nrụpụta, mepee mkpọsa na-akwado ha, setịpụ atụmanya, ma tụọ nsonaazụ ya. Ọbụghị naanị na ndị ahịa nwere ike ịchọ ndị na - eme ihe ike wee kpọọ ha ka ha gaa mkpọsa, ha nwere ike bipụta nkenke mkpọsa nke ndị na - eme ihe nwere ike ịzaghachi. Gwa akwụkwọ bu ihe omuma ndi na eme ka ndi ahia gha:
Chọọ ndị na-eme ihe ike - Kwụsị nkọ na-eme ka gị influencer ahịa dị ka prediktebul na-agba ọsọ Facebook mgbasa. Nyochaa ego ọ bụla ịpị, CPM, ọnụ ọgụgụ nke echiche na usoro ndị ọzọ nwere ike imeziwanye atụmatụ gị ma weta ROI kacha mma.
Mee mkpọsa ihu - Branddị nwere ike dee nkenke, gụnyere ozi ngwaahịa, ntinye ha na-achọ, na ebumnuche nke mkpọsa ahụ. Gwa akwụkwọ wee jiri algorithms ya kọwaa nsonaazụ dabere na ebumnuche. Ndị na - emetụta ya nwere ike itinye ọdịnaya ahụ, nweta nsuso mkpọsa, ma ndị ọzọ nwere ike ịkwado mkpọsa ahụ ma kwenye na ịkwụ ụgwọ.
Lezienụ maka mkpọsa ma ọ bụ arụmọrụ - Gwa akwụkwọ na-enye gị influencer na njikọ nke onwe gị iji soro usoro mkpọsa gị ka akara ahụ wee nwee ike nyochaa arụmọrụ gị ma ọ bụ ọbụlagodi kwụọ gị ụgwọ dabere na omume ahụ.
Gwa akwụkwọ na-enyere ọtụtụ narị puku ndị na-eme ihe ike ka a chọpụta ma na-emekọ ihe karịrị 1000 + ụdị gafee ọtụtụ narị narị ahịa mgbasa ozi mmetụta ụwa.
Gbalịa mee ihe ngosi n'efu
Ngosi: Abụ m mmekọ nke Gwa akwụkwọ na ndepụta Influencer edepụtara.
Tags: chọta ndị na-eme iheesi chọta influencersesi bulie influencersahịa ahịausoro ihe eji ere ahịabuo amụma mkpọsa mmetụtaikwusa ozi oma
Sonix: Ntughari akpaghị aka, Nsụgharị na Ndepụta Okwu na Asụsụ 40 +